Funda ukuba ungayinyusa njani iRhafu ngokudibanisa Amandla aMangalisayo eBhokisi yakho eNcinci yokuKhangela | Martech Zone
Funda ukuba ungayinyusa njani iRhafu ngokudibanisa amandla aMangalisayo kwiBhokisi yakho eNcinci yokuKhangela
NgoLwesine, Agasti 27, 2020 NgoLwesine, Septemba 17, 2020 IVivek Sriram
Ukukhangela lulwimi lwendalo iphela. Kwaye ibhokisi yokukhangela isisango kuzo zonke iimpendulo zakho. Ekhaya ukuphupha malunga nesofa entsha yendlu yakho? uphando esona silala silungileyo kumagumbi amancinci. Emsebenzini uzama ukunceda umthengi ukuba aqonde ukhetho lwabo lokubhalisa? Khangela i-intranet yakho ngamaxabiso asemgangathweni kunye neenkcukacha oza kwabelana ngazo.
Ekusebenzeni okuphezulu, khangela kwaye ukhangele ukukhulisa phezulu nangaphezulu. Abathengi bathenga ngakumbi kwaye bahlala bethembekile, kwaye abasebenzi banemveliso ngakumbi kwaye bahlala bebandakanyekile xa befumana oko bakufunayo, kwaye bafumana iingcebiso ezizezakho.
Ukusuka kumava orhwebo lwedijithali ukuya kwindawo yokusebenza yedijithali yehlabathi, Imisebenzi yoLwazi inceda iinkampani ukwakha ukukhangela okunamandla kunye nezisombululo zokufumanisa idatha ukonwabisa abasebenzisi kunye nokwandisa ixabiso ledatha ekhoyo.
Ukukhangela yindlela engaphezulu kwebhokisi. Inokwenza okanye yaphule onke amava edijithali.
Nantsi imizekelo embalwa yendlela Fusion, Iqonga lokukhangela elinikwe amandla nguLucidworks AI, inceda umthengisi wehlabathi ukuba akhulise ingeniso, ibhanki ephezulu yakha ubudlelwane obunzulu babaxhasi, eyona nkampani inkulu yeoyile kunye negesi yokuxhobisa izigqibo ezixhaswe yidatha, kunye nogcino lwedatha yezonyango exhasa uxilongo olukhawulezileyo kunye nokhathalelo lonyango.
Uluqhube njani uLenovo uPhendlo ukuvula uMthombo wokuKhuthaza ukuGuqulwa kunye nokuBaluleka
Xa uMkhokeli weHlabathi woPhando uMarc Desormeau ethatha iqela lokukhangela iLenovo.com, wajongana nombuzo:
Kutheni le nto ukukhangela kungasebenzi njengoko sifuna njalo?
Ukujonga endaweni yesisombululo sokukhangela esisekwe FAST ngeqonga elinokuxhasa utshintsho olupheleleyo lwedijithali, lenovo yajika yaya kwiGartner kunye neForrester yamathuba aqinisekisiweyo. I-Lucidworks Fusion yacetyiswa. Itekhnoloji yomthombo ovulekileyo we-Fusion ibandakanya izixhobo ezingaphandle kwebhokisi ezivumela ubhetyebhetye kunye nokwenza ngokwezifiso iziphumo zokukhangela zinokulungelelaniswa ngokukodwa kumgca wemveliso, indawo, ulwimi, umsebenzisi, kunye nokunye. Oku kubalulekile kuphawu lwehlabathi njengeLenovo kunye neemveliso ezithatha amashishini e-B2C, SMB, kunye ne-B2B kwaye zisebenzela abathengi kwiimarike ezili-180 ezithetha ngaphezulu kweelwimi ezingama-60 ezahlukeneyo.
Abantu baqala ukuqonda ukuba kukho idatha yokwenyani apha exabisekileyo kwaye singayisebenzisa ukubonisa abathengi bethu ngamava angcono.
UMarc Desourmeau, uMkhokeli weHlabathi woKhangelo, eLenovo
Emva kokumiliselwa kweFusion, uLenovo wabona igalelo lonyaka lwengeniso ngophando olonyuswe ngama-95%. Kwindawo yokuxhasa abathengi yeLenovo, ukucofa amanqanaba kunye namaxabiso okuhlawula kubonise ukuphucuka okumangalisayo, kubonisa ukuba abathengi bakhawuleza bafumane umxholo abawufunayo. Kwakhona, ngokudibanisa umsebenzisi iimpawu-Kubandakanya ukucofa, ukongeza kwinqwelo kunye nokuthenga- ngokufunda ngomatshini, iqela lokukhangela likwazile ukwenza ukuba iziphumo zokhangelo zibenendawo eninzi yedatha kwindawo yabo yolwazi. Ukufaneleka, kulinganiswa ngokuhlala abathengi becofa kwisiphumo sokuqala xa kuthelekiswa nasiphi na isiphumo, kuye kwaphuculwa ngaphezulu kwe-55% kwisithuba seenyanga ezimbalwa ukusukela oko bamilisela imiqondiso yeFusion.
Abasebenzi abakwiBhanki ePhezulu basebenzisa iiNgcebiso eziCwangcisiweyo zokunyusa amaXabiso aBonke abaXumi
Enye yeebhanki eziphezulu zaseMelika yayisokola ukunceda abacebisi bayo bezemali ngokukhawuleza ukuba babone ukuba yeyiphi na, iingcebiso ezifanelekileyo kunye neemveliso zabathengi. Ibhanki ibineziqwenga ezingaphezulu kwama-250 zophando lotyalo-mali ezivelisiweyo kwaye zafakwa yonke imihla kwinkqubo, kodwa uninzi lwabacebisi banexesha lokuziqhelanisa namaxwebhu ali-15-20 kuphela. Kwakungenakwenzeka ukuba uhlunge kuzo zonke izixhobo, uziqhelanise, kwaye ubone ukuba yeyiphi eyona nto ibaluleke kakhulu kubathengi babo abangama-2,000 XNUMX. Ixesha elithathiweyo lokuchonga izisombululo lithetha imveliso ephantsi kunye namathuba aphosiweyo okunxibelelana nabaxumi.
Ukukhangela kungumbindi wokuhamba komsebenzi wabacebisi ngezezimali kwaye kusetyenziselwa ukutshintshela kolunye utyalomali, urhwebo, okanye ukuhamba komsebenzi.
U-Lucidworks wayesazi ukuba abacebisi kufuneka bavule ngokukhawuleza unxibelelwano phakathi komdla womthengi kunye neendlela zokuziphatha. Nge-Fusion, inkampani ikwazile ukuvelisa uluhlu olubekwe phambili lokuqonda kunye nohlalutyo ukubanceda ukuba bachonge ngokukhawuleza Eyona nyathelo ilandelayo kumthengi ngamnye. Abacebisi bezezimali ngoku banokubeka phambili izinto abathengi ekufuneka bezithengile okanye bathengise utyalo-mali oluthile ngokusekwe kwiindlela kunye neepateni kwiiakhawunti, ngokubonelela ngohlobo lwamava olindelweyo "uyandazi". "I-Best Next Action" yenza izigqibo ezithatha ixesha elifanelekileyo kwaye iphucule ukusebenza kwabacebisi ukuze bathengise ngakumbi iinkonzo zabathengi ekujoliswe kuzo ngexesha elincinci. Konke oku kukhokelele kubudlelwane obunzulu nabaxumi kunye nonyuso lwengeniso.
Khuphela i-Ebook yasimahla: Guqula amava abaCebisi bezeMali nge-AI
Ukukhutshelwa kweoyile kunye neGesi Ukuqonda okuvela kwiminyaka eli-150 yeDatha eyiXabiso
Enye yeenkampani ezinkulu zeoyile kunye negesi zazinolwazi oluye lwabuya kwiminyaka eyi-150 lusasazeka kwiphepha, koovimba beenkcukacha, izicelo, ii-imeyile, ezomntu kunye nokwabelana ngemoto, kwihlabathi liphela. Ngenxa yokuba abasebenzi bengakhange bayifumane idatha abayifunayo, baqala ukuyishenxisela kude, ekugqibeleni bekhulisa ulwazi kwi-250 yezigidi zamaxwebhu. Ukufumana okona kuninzi ukuza kuthi ga ngoku, inguqulelo echanekileyo kuzo zonke izixhobo ezingama-28 ezahlukeneyo ezazenziwe yinkampani yayinzima. Enye idatha ibingafakwanga kwizalathiso kwaye eminye imithombo ibingaphezulu kwethabyte enkulu, ekunzima kakhulu ukuyikhomba. Nokuba izixhobo zibuyise iziphumo ezilungileyo, abantu abazithembanga iziphumo- kwaye ukuba awuyifumani into oyifunayo, idatha ayisebenzi.
I-Lucidworks yangena nomsebenzi wokudala amava edatha ngokusebenzisa i-analytics ukudibanisa i-silos yolwazi, ukwenza ikhathalogu ye-agile yomxholo kunye nokubaluleka, kunye nokwenza ukuba abasebenzisi bakhuphe ulwazi olufanelekileyo lweshishini kuzo zonke iziseko zembali. I-Fusion yakwazi ukuhlalutya izigidi zamaxwebhu nge Ukucwangciswa kolwimi lwendalo (NLP) NgesiNgesi, isiFrentshi, isiJamani, isiRashiya, yenza ukuba ulwazi lufumaneke kwimithombo yedatha, kunye nokuququzelela ukufunyanwa kolwazi olutsha kusetyenziswa izinto ezibangela umdla osekwe kubasebenzisi abathile. Ngokuthunyelwa, amaqela okuhlola ayakwazi ukuphakamisa ubutyebi beenkcukacha eziveliswayo, kwaye ngokukhawuleza ukufumana ulwazi oluchanekileyo xa beludinga, olukhokelela ekugqibeleni ekwenzeni izigqibo kunye nokugcinwa kweendleko.
I-AI-Powered Portal Portal inceda oGqirha bafumane isifo kunye nokhathalelo lwezigulana
ZonkeMedx unombono uGoogle koogqirha. Babesazi ukuba oogqirha babekhathazekile ziinjini zokukhangela eziqhelekileyo ezinje ngeGoogle kunye neBing kuba iziphumo zihlala zixutywe nomxholo ongathembekanga owawenzelwe abathengi kunye nezigulana. I-AllMedx ivakalelwa kukuba oogqirha kunye nabanye abaqeqeshi bezempilo banokuxhamla kwisixhobo sokukhangela esiqulathe umxholo waso kuphela kumanqaku aqinisekiswe yi-MD, iijenali zonyango olunefuthe eliphezulu, kunye neminye imithombo yeklinikhi eyaziwayo. Injongo yayikukususa iziqwengana ezingabalulekanga, ezingabalulekanga kangako koogqirha abafuna iimpendulo kwimibuzo yezonyango.
Emva kokuba i-AllMedx yakha ikhowudi eyakhiwe kakhulu esekwe kubuchwephesha bomxholo wezonyango, kufuneka benze lula ukukhangela. Sebenzisa ii-algorithm ze-ML ze-Fusion, iziphumo zophando zenzelwe umsebenzisi ngamnye. Ukuvavanywa komsebenzisi kuvumela I-AllMedx ilungisa kakuhle imibhobho yemibuzo nokwandisa amava okukhangela abasebenzisi. Nge-Fusion, i-AllMedx inokuxhasa ngokuzithemba abasebenzisi bayo abagqirha ngokubonelela ngokufikelela kumaxwebhu angaphezulu kwezigidi ezili-12 avavanyiweyo ngophando olunikwe amandla yi-AI. Ngokusekwe kwingxelo yomsebenzisi kagqirha, iqela le-AllMedx liqinisekile ukuba isiza siyakwandisa ukufikelela kulwazi olubalulekileyo, lokhathalelo lweklinikhi oluya kunceda ukuphucula ukhathalelo lwezigulana.
Funda ngakumbi malunga nendlela i-AI eguqula ngayo iyeza libe ngcono
Fumanisa ukuba yeyiphi i-AI-Powered Digital Transformation eChaza wena
Incopho yala mava edijithali kuwo onke ama-verticals kukuzikhethela, okanye ukubanakho ukuqikelela injongo yomsebenzisi ngamnye. Kulapho ekugqibeleni uyeke amawaka emithetho elawulwa ngesandla kwaye endaweni yoko ungagcini nje ngokuhlaziya kwangaphambili, kodwa yokufunda umatshini, iimpawu, yaye Ukulungiswa kolwimi lwendalo. Ngokudibeneyo, zonke ezi teknoloji zixhobisa ukukhangela kwakho ukuba zingaphezulu kakhulu kwebhokisi encinci kwikona yesikrini.
Kwaye ibhokisi yokukhangela ayisiyiyo kuphela yamava edigital avuthiweyo yenguqu- ilumke kangakanani ingxoxo yakho? Olunye lolona phuculo lubaluleke kakhulu kunye nendalo yonke onokuthi uyenzele ishishini lakho kukumilisela isisombululo se-chatbot smart. Imisebenzi yoLwazi Iimpendulo ezikrelekrele sisincoko sencoko esisebenza kuyo yonke Ukulungiswa kolwimi lwendalo, yokufunda umatshini, yaye ukuqokelela imiqondiso indalo kwiFusion kumava encoko. Ukuzenzela inkonzo engcono nge-chat chat efanelekileyo kunika abasebenzisi ngenkonzo ekhawulezayo kunye nokukhulula inkxaso kunye neearhente zoncedo ukugxila kumatyala antsonkothileyo, angaphandle. Abathengi banelisekile kwaye abasebenzi bazibandakanya kakhulu nomsebenzi wabo.
Nokuba yibhokisi yokukhangela engenanto okanye umncedisi okrelekrele okrelekrele, iLucidworks Fusion ibonelela ngamanqanaba okushishina ukuyila, ukuphuhlisa, kunye nokuhambisa usetyenziso lokukhangela olukrelekrele nakweyiphi na inqanaba, kwaye yamkelwe ngophando lwetekhnoloji elizimeleyo kunye neenkampani zokucebisa iForrester kunye neGartner. Iinkampani kwi-Global 2000 zixhomekeke kwiLucidworks yonke imihla ukunika amandla ukujongana nabathengi kunye nezicelo zokukhangela zeshishini. Ngaba unomdla wokuqonda ukuba ungafumana njani ngakumbi kuphendlo lwakho?
Nxibelelana noLucidworks namhlanje
tags: Ukukhangelwa kwe-aiZonkezebhankiingxoxoamava edathautshintsho lwe digitali-forresteruphando lwangaphakathiLenovoIxabiso lobomilucidworkUkudityaniswa kukaLucidworksyokufunda umatshiniUkulungiswa kolwimi lwendaloisenzo esilandelayo esilandelayonlpiimpawuiimpendulo ezikrelekreleinkxasoukukhangela okuncinciumncedisi onokubona
Ngaphambi kokujoyina uLucidworks, uVivek wakhokela imveliso kunye nophuhliso lweshishini lokukhangela kwiiNkonzo zeWebhu zeAmazon, apho wenza khona i-Amazon Elasticsearch Service kwaye wanceda ukukhulisa ishishini lokukhangela ukusuka ekuqaleni ukuya kwinqanaba elikhulu. Kwiminyaka engama-20 nangaphezulu kwisoftware uVivek wakhonza kwezobunjineli, kuphuhliso lweshishini, nakwindima yemveliso kwiinkampani ezahlukeneyo kubandakanya iVizu (efunyenwe nguNielsen), Ulwazi oluHlanganisiweyo (olufunyenwe nguNeustar), kunye ne-SBI Razorfish.
Amanyathelo ama-3 esiya kwiSicwangciso esiliQili seDijithali sabaPapashi abaqhuba ukuBandakanyeka kunye neNgeniso
I-Crunchbase Enterprise ye-Salesforce: Ukuchonga, ukungenisa, kunye nokuvumelanisa i-B2B Prospect Data